I. Ny firafitra sy ny firoboroboan'ny modules fakantsary fakan-tsary dia nampiasaina betsaka tamin'ny vokatra elektronika isan-karazany, indrindra ny fampandrosoana haingana ireo indostria toy ny telefaona finday sy takelaka, izay nahatonga ny fitomboan'ny indostrian'ny fakantsary. Tato ho ato dia ...
Fakan-tsary fakantsary hafanana tsy misy fotony miaraka amin'ny "maripana"
Fitsipika miasa Ny hazavana voajanahary dia misy onja maivana miaraka amin'ny halavan'ny halavany. Ny elanelana hitan'ny mason'olombelona dia 390-780nm. Ireo onja elektromagnetika dia fohy kokoa noho ny 390nm ary lava noho ny 780nm tsy ho tsapan'ny mason'olombelona. Anisan'izany ny onja elektromagnetika miaraka amin'ny ...
Rafitra fototra sy fotokevitra fiasan'ny modely fakantsary
Ny firafitry ny fakan-tsarimihetsika fakantsary I. Ny firafitry ny fakan-tsary sy ny fotokevitra miasa Nitifitra tamin'ny alàlan'ny solomaso ilay seho, namboarina teo amin'ilay sensor ilay sary optique namboarina, ary avy eo navadika ho signal elektrika ilay sary optique, izay navadika ho signa nomerika ...